ကျွန်တော်၏ Hiveပျိုးခင်း - Neoxian City
မဂ်လာပါ Hive အဖွဲ့သားတို့ခင်ဗျား။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် စာများများ မရေးနိုင်ဖြစ်၍နေရသည်။ နေ့စဉ်အလုပ်ကလေးများ လုပ်နေရသဖြင့် အားလပ်ချိန်ကို လုယူနေရသည်။ Hive ပလက်ဖောင်းပေါ် အေးအေးဆေးဆေး ပိုစ်တင်နိုင်သည့်အချိန်မှာ ကျွန်တော့အတွက် ညပိုင်းသို့ ရောက်နေပါပီ။
ကျွန်တော် အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်သည်နှင့် အရင်ဦးဆုံးလေ့လာမိသည်က Hive Token ဈေးနှုန်းပင်ဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့များမှစ၍ Hive ဈေးနှုန်းသည် သိသိသာသာ တက်လာနေကြောင်း Hive ပလက်ဖောင်းရှိ မီဒီယာပေါင်းစုံတွင် လူပြောများနေသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေပေသည်။
( Photo are Screen shoot from CoinmarketCap )
ကျွန်တော်ပျော်ရပါသည် အဘယ်ကြောင့်ဟူမူကား ကျွန်တော်တို့လို အကောင့်သေးလေးများသည် ပါဝါများသူတို့အား မှီခိုနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Hiveဈေးနှုန်းတက်လာပါက မိမိတို့ ပိုစ်များသည် ဘုတ်ပါဝါအတူတူ ပေးသည်ဆိုအုန်း ရရှိလာသော ဘုတ်တန်ကြေးကား မတူတော့ချေ ပိုစ်တစ်ခုတိုင်းတွင် ဘုတ်တန်ကြေးပို၍ရရှိလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခင်က 1$လောက်သာရသော ပိုစ်သည် ယခုအခါ 2$ခန့်တော့ အသာလေးရလာနေသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး Hive ဈေးနှုန်းတက်လာခြင်းအား ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီအနေဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပျော်ကြရသည်။ Hive ပလက်ဖောင်းကြီးသည်လည်း ဒီထက်မက တိုးတက်ထွန်းကာလာမည်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိရှိခံစားလို့ ရနေပေသည်။
သို့နှင့် ကျွန်တော်သည်လည်း မိမိ၏ Hive ပျိုးခင်းလေးအား Hive-engine တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းပြုမိသည်။ အကယ်၍ hive-engine wallet တွင် တိုကင်လေးများ စုမိဆောင်းမိ ရှိနေပါက အကျိုးရှိစေရန် Stakeပြုလုပ်ထားလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
( Above image is screen shoot from Hive-engine wallet )
Hive-engine wallet တွင် ကျွန်တော်၏ စုဆောင်းမိနေသော တိုကင်လေးများအား Stake ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိသည်တို့အား Stake ပြုလုပ်ကာ ဆက်လက်၍ ရေလောင်းပေါင်းသင် အားဖြည့်ပေးခဲ့ပါသည်။ မိမိ၏ အကောင့်သည် သေးငယ်သော်လည်း နောင်တစ်ချိန်တွင် တိုကင်များစွာ ဆုဆောင်းမိနေသော wallet တစ်ခုဖြစ်လာတော့မည်ဟု ကျွန်တော် စဉ်းစားရင်း ပျော်နေမိပါသည်။
(Above images are screen shoot from Hive-engine wallet )
ကဲ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်၏ Hive ပျိုးခင်းလေးအကြောင်း တင်ပြရင်း ကျွန်တော့ပိုစ်အား တစ်ခန်းရပ်ပါဦးမည်။
Hive မိတ်ဆွေအပေါင်း ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။
hive-122133 blog proofofbrain trafficinsider hive-engine token archon palnet hive-list neoxian
Good ဗျ ပျိုးခင်းလေး တိုးတက်လာပီ။ !LOLZ !PIZZA
@nyimwa, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyinyiwin
sheinthu tipped nyimwa (x1)
@kachinhenry(19/20) tipped @nyimwa (x1)
@nyimwa, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
ဟုတ်တယ် စိတ်ချမ်းသာနေတာ !LOLZ
@htwegyi, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyimwa
ဟုတ်တယ် ကွီးရွေ ပျိုးခင်းလေးကလည်း ရွှေလက်ရာတွေနဲ့အတူ များမကြားမှီ အပွင့်ဖားဖားလန်လန်းကြီးတွေ ရှုးစားရတော့မှာ။!PIZZA
@sheinthu, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyimwa
ရေလောင်း ပေါင်သင်သာ ပြုလုပ်ပေးပါ.... အသီးအပွင့်တွေ ဝေဆာလာပါလိမ့်မယ်။ !PIZZA. !LOL
@kachinhenry you can call @lolzbotamaximum of4per day.
ဟုတ်ကဲ့ ကိုဟင်ရေ ကြိုးစားနေပါတယ်ဗျ။ !LOLZ